Kunetseka: Chikonzero cheKubvisa Vhudzi | Natural Bvudzi Regrowth & Bvudzi Kurasikirwa Kurasikirwa
Kushungurudzika kunokanganisa bhudhi veduwekukura bvudzi kutenderera Iyo yakajairika munhu anorasikirwa neyakafanana ne100 bvudzi zuva rega rega. Kana tikatarisa iyo nhamba uye vhudzi rakawanda sei riri pamusoro wemunhu (~ 150,000) bvudzi iro haritombo zivikanwe kunyanya sezvo isu tiri kugadzirawo vhudzi sechikamu chebvudzi rekutenderera kutenderera. Iyo bvudzi kukura kutenderera
Kushushikana kunokanganisa kutenderera kwedu kwebvudzi kukura
Iyo yakajairika inorasikirwa neyakaoma vhudzi 100 zuva rega rega. Kana tikatarisa iyo nhamba uye vhudzi rakawanda sei riri pamusoro wemunhu (~ 150,000) bvudzi iro haritombo zivikanwe kunyanya sezvo isu tiri kugadzirawo vhudzi sechikamu chebvudzi rekutenderera kutenderera.
Iyo bvudzi kukura kutenderera zvinonyatsoita kana bvudzi rinokura uye pane imwe nhanho rinorega kuvandudzwa, uyezve pane imwe nguva gare gare rinowira pasi.
Bvudzi Upenyu Maitiro
Iyi nhanho yekuvandudza, sainzi inozivikanwa se "anagen" yebvudzi remunhu inogona kugara makore maviri kusvika matanhatu. Pakati peino nguva bvudzi rinogona kuramba richikura kusvika pamakore matanhatu apo bvudzi rako rinozopedzisira rabuda kunze chaiko. Zvikamu zvakasiyana zvemusoro wedu nevhudzi zvine zvakarewo hupenyu hupenyu hwakaringana. Kana rikatambanudzirwa kumusoro wako wese, dzimwe bvudzi dzinozogara kwenguva refu kupfuura dzimwe asi panguva ipi neipi yakapihwa kuverengeka kwebvudzi rinokura riri kuita 150,000. Mushure mekunge anagen (kukura chikamu), bvudzi rinopinda mune yesainzi inonzi "catagen", iri apo bvudzi bvudzi rinotanga kuderera panguva yakasarudzika ipfupi inotora anenge mazuva matatu chete. Zvinonakidza mushure mechikamu checatagen chinouya iyo "telogen", iri bvudzi kana bvudzi richingoita zvaro uye risingabatsiri chinhu. Uye zvakare, pakupedzisira, "exogen" izwi resaenzi parinopera.
Kucheka Bvudzi Nekuda Kwekushushikana
Kushungurudzika kunofungidzirwa kukanganisa iyi kukura kwevhudzi sequence, ichikonzera balling nekuda kwekushandurwa kwenguva yenguva yekubudirira chikamu ("anagen"). Zvakapesana nebvudzi rinokura muchikamu charo chekusakura chebvudzi kukura, kusagadzikana kunoita sekunge kuneta bvudzi zvimedu zvichikonzera kuti dzimwe bvudzi dzitange kupinda muchikamu chekuzorora ("catagen"). Panguva imwe chete iyi, idzi bvudzi dzinodonhedzera nguva pamwe chete pamwe chete nedzimwe bvudzi dzinotetepa bvudzi pane ganda.
Kucheka Bvudzi revakadzi
Kuteura Mass kwakawanda kunoonekwa kazhinji mushure mekunge Vakadzi vabereka. Shanduko mumuviri uye mahormoni zvinokanganisa maitiro enguva dzose ekukura kwebvudzi uye anogona kukonzera kutetepa bvudzi revakadzi. Kutetepa-kwepakati kutetepa kwebvudzi kunogona kuitikawo nekuda kweiyo shanduko mumahormone ayo anochinja akajairwa kukura bvudzi kutenderera chikamu. Izvi zvinozivikanwa se “Telogen Effluvium” uye zvinowanzoitika muvakadzi nekuda kwekuchinja kwemahormone kunoita kuti denderedzwa rebvudzi rishanduke.
Telogen Effluvium haingobatwe nekushanduka kwehomoni uye zvinogona kuve nezvakawanda zvinokonzeresa kutenderera kwebvudzi kutenderera, izvi zvinosanganisira: Kushushikana kwakanyanya, kurema uremu, zvinodhaka uye kusadya zvakanaka kunoita kuti vhudzi riwedzere.
Chero chipi chinhu chinogona kukonzera kuti muviri uve nekusagadzikana kana kuchinja maitiro akajairwa ekuita anogona kunyatso kukonzera bvudzi kurasikirwa.
Kurapa telogen effluvium kazhinji zvinoenderana nezvakatsunga kuve mukukuvadza rako kutenderera bvudzi kutenderera. Semuenzaniso, kana kunetseka, shandisa nzira dzekuzorora nekufungisisa. Kana kuri kuderedza uremu kuve nechokwadi chekuti uri kudya zvese zvakanaka zvikafu zvekupa muviri wako muviri. Zvichingoenda zvakadaro.
kusuruvara kwebvudzibvudzi rinoperakushushikanakusagadzikana kukonzera kupera kwebvudzikushungurudzika kutetepa kwebvudzitelogen effluvium